Flangle Connection အမျိုးအစားနှင့်အတူ Liquid Trap သံလိုက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | Meiko သံလိုက်
အရည်ထောင်ချောက်သံလိုက်Flangle Connection နှင့်အတူ s တွင်သံလိုက်ပြွန်ခွဲထားသောအုပ်စုများနှင့်အပြင်ဘက်ရှိသံမဏိအိမ်များဖြစ်သည်။ Inlet နှင့် Outlet သည် flanger connection type များမှတဆင့်ရှိပြီးသား processing line နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သံလိုက်အရည်ထောင်ချောက်များသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှိပစ္စည်းများသန့်စင်နိုင်ရန်အတွက် ferrous ပစ္စည်းကိုအရည်၊ semi-liquid နှင့် air conveying အမှုန့်များမှထုတ်ယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အိမ်အတွင်းရှိခိုင်ခံ့သောသံလိုက်ပြွန်များသည်စီးဆင်းမှုကိုစစ်ထုတ်ပြီးမလိုချင်သော ferrous သတ္တုကိုထုတ်ယူသည်။ အဆိုပါယူနစ်ရိုးရှင်းစွာအနားကွပ်သို့မဟုတ် threaded ကြီးစွန်းကနေတဆင့်လက်ရှိပိုက်လိုင်းမှတပ်ဆင်ထားသည်။ လျင်မြန်စွာလွှတ်ပေးသည့်ညှပ်ကို အသုံးပြု၍ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
1. အခွံမာပစ္စည်း: SS304, SS316, SS316L;
2. သံလိုက်စွမ်းအားအဆင့်: 8000Gs, 10000Gs, 12000Gs;
3. အလုပ်လုပ်အပူချိန်တန်း: 80, 100, 120, 150, 180, 200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်;
၄။ ရရှိနိုင်သည့်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး - လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းသောအမျိုးအစား၊ မျဉ်းကြောင်းဖြင့်ပိုက်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ၊
၅။ ဖိသိပ်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - ၆ ကီလိုဂရမ် (0.6Mpa) အမြန်ဖြန့်ချိရန်ဖိအားနှင့် ၁၀ ကီလိုဂရမ် (၁.၀Mpa) အနားကွပ်နှင့်အတူ။
အရည် Inline သံလိုက်ထောင်ချောက်
သံလိုက် Separator သန့်ရှင်းရေး